Sina: Famelezana ireo blaogy bitika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jolay 2010 9:24 GMT
Araka ny vaovaon'ny Apple Daily androany, nandray fepetra hentitra amin'ny fanaraha-maso ny fiasan'ireo fitorahana blaogy fohy kely rehetra ny sampan-draharaham-panjakana misahana ny serasera sy ny fampahalalam-baovao.
Hatramin'ny nahavoasakana ny Twitter sy ny Facebook tany Sina no niroboroboan'ny valan-tserasera isan-karazany. Maro amin'ireo vavahadin'ireo vohikala, tahaka ny Sina, Sohu, 163.com ary Tencent, no nanolotra ny famahanana blaogy fohy ho an'ny rehetra. Tao anatin'ny herintaona, ohatra, nanambara ny mpanolotra famahanana blaogy fohy Sina fa manana mpampiasa 20 tapitrisa izy ireo.
Tamin'ny herinandro lasa teo, ny Sekoly ambony misahana ny Siansa Sosialy no nampianatra ny momba ny media vaovao nandritra ny valan-dresaka niarahana tamin'ny mpanao gazety, navoitran'ireo mpikaroka fa afa-mandrafitra indray ny fomba fifandraisana ara-piaraha-monina ny valan-tserasera sy ny fitorahana blaogy fohy, ka afa-mandrava ny rafitra efa misy noho izany. Nasongadin'ny fampahalalam-baovaom-panjakana CCTV izany filazana izany ka nampisy resabe nahatonga ny antoko komonista sinoa hanapa-kevitra handrava ireo tolotra momba ny valan-tserasera sy ny fitorahana blaogy fohy ireo.
Tao anatin'ny andro vitsivitsy izay, hatramin'ny 9 Jolay, maro ireo mpampiasa ny aterineto no manana olana amin'ny tranonkala ampiasana fitorahana blaogy fohy. Ny sasany tsy afa-mandeha hafatra intsony; ny hafa indray mahita fa tsy hitan'ny hafa akory ny nosoratan'izy ireo faramparany. Nikatona noho ny fikojakojana kosa ny famahanan-bolongana fohy 163 tamin'ny 13 Jolay (ity ambany ity ny sary nalaina mikasika ny filazana).
tolotra blaogy bitika 163
Nolazain'ny loharanom-baovao (avy amin'ny Apple Daily) fa fambara ireo rehetra ireo ho fanombohan'ny fanaraha-maso sy ny sivana an-tserasera ka ny tanjona farany dia ny hamadihana ireo valan-tserasera ireo ho “fitaovam-piasan'ny Antoko Komonista Sinoa sy ny Governemanta ho mpitondra teniny”. Afaka mamoaka “vaovao famalifaliana” izy ireo fa tsy vaovao politika sy sosialy intsony.